July Dream: At this moment
Posted by JulyDream at 11:38 PM
make me liver itchy itchy
Wow.!! At this moment မှာ ဒီလောက်တောင် များရလားဗျ... At the moment မှာဆိုရင် မတွေးဝံ့စရာပါလားဗျာ။
e တွေ ပေါက်နေတယ်ဆိုလို့လာဖတ်တာ...
ချစ်သူသနားဖို့အတွက် တော့ မဖျားပါစေနဲ့...
ကူးစက်ရောဂါမို့ဆိုပြီး အိုင်စိုလေးရှင်းဝပ်ဒ်ထဲ ရောက်သွားမှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေဦးမယ်...
သောက်ခွက်စာအုပ် (အဲ... ဟုတ်ပါ့....)
(၀န်ခံချက်တွေကို လေးစားသဘောကျ အလေးပြုသွားပါတယ်...)
နောက်တနေ့မှာ ချီးဖြစ်မယ့်အရာတွေ စားဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောကတည်းက ထော်လော်ကန့်လန့်
ဂွကျကျ ပြောတတ်တဲ့သူဟာ မောင်ဇူလိုင်မှန်း သိသာနိုင်တယ်ဆိုတာ ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီး လေ့လာမိပါကြောင်း....သဘောပေါက်ပါတယ်...
မကောင်းဘူး ဂွစာ.... တတ်နိုင်သမျှထိန်း ..
စကားလုံးတွေက တဆင့် တုံပြန်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တယ်..ဟာ..
ဟီးးးး ဂွစာ အဲဒါတွေကြောင့် နင့်ကို ငါ စချင်တာဟ ..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နင့်စိတ်ဓာတ်နဲ့ ငါ့စိတ်ဓာတ်တူတာကိုး..။
ဒါဆိုခံယူချက်နဲ့ ကိုက်ညီရင် ယပ်လာခပ်ပေးမယ်ပေါ့
ရည်းစားတွေ မှိုလိုပေါက်အောင် ထားခဲ့တယ် ဆိုတာ သိရလို့ ချစ်သူလေး စိတ်ကောက်နေဦးမယ်။
စားဖြစ်နေတာက နောက်နေ့မှာ ချီးဖြစ်မယ့်အရာတွေ တကယ်မှန်ရင် သိပ်ကောင်းတယ်၊ ကိုယ်အလေးအချိန်မတက်ဘူး အမျှင်ဓါတ်များတဲ့ အစားအစာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာဖြစ်တယ်။
ဒါပေယ့် ကိုဂျူလိုင်စားတာ ဒီလို Healthy food တွေသက်သက် မဖြစ်နိုင်ဘူး အရင် လတွေတုန်းက ရေးထားတဲ့ ပို့စ်တခုမှာ ကိုယ်က ၀က်ကိုယ်လုံး ဖြစ်နေတယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်။ ၀က်ကိုယ်လုံး ဖြစ်လာမှတော့ စားလိုက်တဲ့ အစားအစာမှာ နောက်နေ့ ချီးဖြစ်တဲ့ အမျှင်နည်းတဲ့ အစာစားနည်းလို့သာ ဖြစ်တယ်။ ချီးဖြစ်မည့်အစာကို များများစားပြီး သွေးကြောထဲသွားတဲ့ အစာကို အတော်အသင့်ပဲ စားမှ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်လို့ တကယ်မှန်ရင် ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်စားဖို့ အားပေးပါတယ်။
အော်အော်နေတဲ့ စာတွေကို ဂျီဟိုဒ် လုပ်ဖတ်ရင်း
ကြိတ်ချီးကျူးနေမိတတ်တာ... ခုလည်း ကြော်ငြာ တချို့ကလွဲ့ရင် ကျန်တာအကုန်အမှန်လို့ယူဆပါ၏း)း)
.......အမယ် လယ်မစိုက်နဲ့တဲ့..ကျူပ်ကိုလယ်ထဲ ရောက်အောင် ဝက်တစ်ကောင်စပို့လိုက်တာဘယ်သူလဲ
ထော်လော်ကန့်လန့် ဂွကျကျပြောလွန်းလို လူမုန်းများနေပြီ...”
ဟုတ်တာတွေကို ချရေးပြနေပြန်ပြီ...း)))
အစ်မကတော့ အမုန်းမခံချင်လို့ ရှောင်နေလိုက်တာ...စိတ်ထဲတော့ဘာမှ မရှိပါဘူး..သြော်..ဒီကောင်လေးနဲ့ ပေါင်းသင်းကြည့်မှလူဂွစာလေးမှန်းသိတာလေ... .. နားလည်ပါတယ်...တကယ်တော့ စိတ်ရင်းလေးက ကောင်းတယ်.. ကူညီတတ်တယ်..ဒီလိုလူတွေက တိကျတယ်..ဒါပေမယ့် ကိုယ့်တစ်သက်လုံးမှာ မောင်ဇူလိုင်နဲ့တွေ့မှပဲဘုဂလန့်အပြောခံရတာဖြစ်တဲ့အ
တွက် ခံစားလို့မရဘူး။ဒါပေမယ့် ရိုင်းပင်းကူညီပေးတတ်
(အဲဒါကိုတော့ ကြောက်ပါတယ်...အခုလို မရေးခင်ကတည်းက ဒီလိုစိတ်ဓါတ်ကလေးဖြစ်နိုင်တယ်
ဒါပေမယ့် ရတာမလို ၊လိုတာမရတဲ့ လောကကြီးမှာ စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ လူတွေနဲ့အဆင်ပြေစွာ ပေါင်းသင်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ဇူလိုင် ရေ..(စကားလုံးတွေထဲမှာ အမှားပါသွားခဲ့ရင် ခွင့်လွတ်ပါ..အငြိုးနဲ့တော့ မတုန့်ပြန်ပါနဲ့..အရှုံးပေးပါတယ်.) =))
ဘယ်လို ရီရမှာ လဲ.. ကောင်မလေးတွေ ရီသလို ခွိခွိ လား... မင်းရီ သလို ..ဟဟ လား...း)..း)
သူများကိုကျ လှောင်တယ်.. ခွေး မောင်လေး...း)
မင်း အပေါက်ဆိုးမှန်းသိပေမဲ့..ဖြူစင်ရိုးသားတယ်ဆိုတာ သေချာတော့ .. မောင်လေးအဖြစ် အမြဲ မှတ်သွားပေးပါ့မယ်.. မောင်လေး ရေ..
မင်း မိန်းမတောင်း လိုက်နိုင်အောင် မမ ငွေစုနေတယ်..း)
:) တောင်းနေမိတဲ့ ဆုလေးကို ကြိုက်ပါတယ် ရှင်...
ဖြစ်ချင်တာချင်းတော့ တူတယ် စီနီယာ။
ဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ဖြစ်ကို မြည်နေတာပဲ။
မဖြစ်နိုင်ဘူး လုံး ...........ဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဒီလောက် ထော်လော်ကန့်လန့် ဂွကျကျ ဂဏန်းကောင်မှာ ရည်းစားသက်ရှိ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ လုံး ...........ဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဟီဟိ .. ကိုင်း လာရန်တွေ့စမ်း။
လွမ်းမှ လွမ်းပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်လိုက်ရတာ
8 စာတွေ ဖြစ်နေတဲ့ကြားက default တွေ ပါအောင် ရေးသွားတာကို လာဖတ်သွားပြီ
အခုတလောတော့..ဒီကောင်လေး..စိတ်ရိုင်းတွေ ၀င်နေပါလား။ အေးအတူပူအမျှ..ခြင်ဆေးမဖြန်းရလို့ ထင်တယ်။း)
ဟာ တော်ပြီ .. မတွေးတော့ဘူး...။
ဘုရား ဘုရား စာသားတွေက ရဲရင့်လှချည်လား ကိုဂျူလိုင်ရေ... မိုက်တယ်ဗျာ... မနက်ဖြန်ချီးဖြစ်မယ့်ဟာတွေ စားနေရဦးမယ်
အေးလေ အကယ်ဒမီရတာလဲ မဆန်းပါဘူး။
ကိုဇူလိုင်ရဲ့ ခုတလောကို ဖတ်ရင်း ကိုဇူလိုင်ဆုတောင်းသလို ဆုတောင်းလိုက်တယ်